Ruka 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 4:1-44
Dhiyabhorosi anoedza Jesu (1-13)
Jesu anotanga kuparidza muGarireya (14, 15)
Jesu anorambwa muNazareta (16-30)
Musinagogi kuKapenaume (31-37)
Amai vemudzimai waSimoni nevamwe vanhu vanoporeswa (38-41)
Vanhu vakawanda vanowana Jesu ari kwake ega (42-44)
4 Jesu akabva azadzwa nemweya mutsvene, ukamubvisa kuJodhani, ndokumutungamirira uchitenderera naye murenje+ 2 kwemazuva 40 achiedzwa naDhiyabhorosi.+ Uye hapana chaakadya mumazuva iwayo, saka pakapera mazuva acho, akanga ava nenzara. 3 Dhiyabhorosi akabva ati kwaari: “Kana uri mwanakomana waMwari, udza dombo iri kuti rive chingwa.” 4 Asi Jesu akamupindura kuti: “Zvakanyorwa kuti, ‘Munhu haangararami nechingwa chete.’”+ 5 Saka akaenda naye pakakwirira ndokumuratidza umambo hwese hwenyika munguva pfupi pfupi.+ 6 Dhiyabhorosi akabva ati kwaari: “Ndichakupa simba pane hwese uhwu nekubwinya kwahwo, nekuti hwakaiswa mumaoko angu,+ uye ndinohupa wandinenge ndada. 7 Saka ukangondinamata kamwe chete, hwese hunenge hwava hwako.” 8 Jesu akamupindura achiti: “Zvakanyorwa kuti, ‘Jehovha* Mwari wako ndiye waunofanira kunamata, uye ndiye ega waunofanira kuitira basa dzvene.’”+ 9 Akabva aenda naye kuJerusarema, ndokumumisa pamusoro perusvingo rwetemberi,* akati kwaari: “Kana uri mwanakomana waMwari, zviwisire pasi uchibva pano,+ 10 nekuti zvakanyorwa kuti, ‘Acharayira ngirozi dzake pamusoro pako, kuti dzikuchengetedze,’ 11 uye, ‘Dzichakutakura mumaoko adzo, kuti tsoka yako irege kugumburwa nedombo.’”+ 12 Jesu akamupindura achiti: “Zvakanzi, ‘Usaedza Jehovha* Mwari wako.’”+ 13 Saka Dhiyabhorosi paakanga apedza kumuedza, akamusiya kusvikira pane imwe nguva yaizomuka mumwe mukana.+ 14 Jesu akazodzokera kuGarireya ari musimba remweya mutsvene.+ Uye zvakanaka zvaitaurwa nezvake zvakapararira munharaunda yacho yese. 15 Akatangawo kudzidzisa mumasinagogi avo, uye vanhu vese vaimuremekedza. 16 Akabva aenda kuNazareta,+ kwaakakurira, uye sezvaaiwanzoita kana riri zuva reSabata, akapinda musinagogi,+ akasimuka kuti averenge. 17 Saka akapiwa gwaro* remuprofita Isaya, uye akarivhura, akawana pakanga pakanyorwa kuti: 18 “Mweya waJehovha* uri pandiri, nekuti akandizodza kuti ndizivise varombo mashoko akanaka. Akandituma kuti ndizivise nezvekusunungurwa kune vaya vakatapwa uye nezvekusvinudzwa kwemaziso kumapofu, kuti ndisunungure vakadzvinyirirwa,+ 19 kuti ndiparidze nezvegore rekufarirwa naJehovha.”*+ 20 Akabva apeta gwaro racho, akaridzorera kumurindi, ndokugara pasi; uye maziso evanhu vese vaiva musinagogi akanga ari paari. 21 Akabva ati kwavari: “Nhasi rugwaro rwamuchangobva kunzwa urwu rwazadziswa.”+ 22 Vese vakatanga kumupupurira zvakanaka vachishamiswa nemashoko anofadza aibuda mumuromo make,+ vachiti: “Haasi iye mwanakomana waJosefa here uyu?”+ 23 Akati kwavari: “Ndine chokwadi kuti muchashandisa mashoko aya pandiri, ‘Chiremba, zvirape. Itawo kuno kumusha kwako zvinhu zvatakanzwa kuti wakaita kuKapenaume.’”+ 24 Saka akati: “Chokwadi ndinokuudzai kuti hapana muprofita anogamuchirwa kumusha kwake.+ 25 Asi ndinokuudzai chokwadi: Kwaiva nechirikadzi dzakawanda muIsraeri mumazuva aEriya paya pakavharwa denga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, nyika yese ikaita nzara huru.+ 26 Asi Eriya haana kutumwa kune mumwe wevakadzi ivavo. Akangotumwa kune imwe chirikadzi yekuZarefati kunyika yeSidhoni.+ 27 Kwaivawo nevakawanda vaiva nemaperembudzi muIsraeri munguva yemuprofita Erisha; asi hapana kana mumwe wavo akacheneswa,* kunze kwaNaamani wekuSiriya.”+ 28 Vese vainzwa mashoko aya vari musinagogi vakaviruka nehasha,+ 29 uye vakasimuka, vakakurumidza kubuda naye kunze kweguta, vakaenda naye kumawere egomo, pakanga pakavakirwa guta ravo, vachida kumusundidzira kuti adonhe nemusoro. 30 Asi akapinda nepakati pavo chaipo, akabva atoenda.+ 31 Akabva adzika kuKapenaume, guta reGarireya. Uye aivadzidzisa paSabata,+ 32 vachishamiswa nemadzidzisiro ake,+ nekuti aitaura zvine chiremera. 33 Musinagogi maiva nemumwe murume akanga akagarwa nemweya usina kuchena, uye akashevedzera nenzwi guru achiti:+ 34 “Aa! Munei nesu, Jesu wekuNazareta?+ Mauya kuzotiparadza here? Ndinonyatsoziva kuti ndimi ani, Mutsvene waMwari.”+ 35 Asi Jesu akatuka dhimoni racho achiti: “Nyarara, ubude maari.” Saka rakadonhedzera murume wacho pasi pakati pavo, rikabva rabuda maari risina kumukuvadza. 36 Izvi zvakaita kuti vese vashamisike, uye vakatanga kutaurirana vachiti: “Uku kutaura kwerudzii? Anotaura nechiremera nesimba achiudza mweya isina kuchena kuti ibude, iyo yobuda!” 37 Saka mashoko pamusoro pake akaramba achipararira nenyika yacho yese. 38 Paakabva pasinagogi, akapinda mumba maSimoni. Amai vemudzimai waSimoni vakanga vachirwara nefivha yakasimba kwazvo, uye akakumbirwa kuti avabatsire.+ 39 Saka akamira pavaiva, akatuka fivha yacho, ikabuda mavari. Vakabva vasimuka pakarepo, vakatanga kuvagadzirira zvekudya. 40 Asi zuva parakanga rava kuvira, vese vaiva nevanhu vanorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana vakauya navo kwaari. Akavarapa nekuisa maoko ake pane mumwe nemumwe wavo.+ 41 Madhimoni aibudawo mune vazhinji, achishevedzera kuti: “Ndimi Mwanakomana waMwari.”+ Asi iye aiatuka, asingaabvumiri kutaura,+ nekuti aiziva kuti ndiKristu.+ 42 Asi pakwakaedza, akabuda, akaenda kwake ega.+ Asi vanhu vakatanga kumutsvaga,* vakasvika kwaakanga ari, uye vakaedza kumunyengetedza kuti asavasiya. 43 Asi iye akati kwavari: “Ndinofanirawo kuzivisa mashoko akanaka eUmambo hwaMwari mune mamwe maguta, nekuti ndizvo zvandakatumwa kuzoita.”+ 44 Saka akaenderera mberi achiparidza mumasinagogi eJudhiya.
^ Kana kuti “panzvimbo yakakwirira kupfuura dzese yetemberi.”
^ Kana kuti “akaporeswa.”
^ Kana kuti “kumuvhima.”